November 10, 2020 - Babal Khabar
Nov102020 by बबाल खबरNo Comments
खुशीको खबर: एक महिना भित्रै कोरोनाको खोप आउने, एस्तो छ वितरण प्रकृया !!
खुशीको खबर: एक महिना भित्रै कोरोनाको खोप आउने !! कोरोनाको खोप सम्बन्धी एक खुशीको खबर छ । आगामी डिसेम्बरभित्र कोरोनाको खोप आउने सम्भावना देखिएको छ । कोरोना खोप उत्पादनमा सक्रिय औषधी उत्पादन कम्पनीहरुले यस्तो संकेत दिएका हुन् । औषधी उत्पादनमा सक्रिय मध्येका एक एस्ट्राजेनेका फार्मासियुटिकल्सका सिइओले आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरस खोप तयार भइसक्ने सम्भावना देखिएको बताएका छन् ।कम्पनीका सिइओ पास्कल सोरियटले नियमन गर्ने निकायहरूबाट अनुमति पाएपछि खोप सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने गरी उपलब्ध हुने बताएका हुन् । त्यहाँ पनि यसका दुइटा परीक्षणमा सफल नतिजा आएको छ भने तेस्रो पनि प्रभावकारी देखिएको एस्ट्राजेनेका चीनका अपरेसन हेड लियोन जाङले जनाएका छन्। यो बाहेक चीनले आफैं बनाउँदै गरेको खोप पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमा छ पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमा छ। *** यो समाचार पुरा हेर्न तलको लिङ्कमा क्लि
यस वर्षको भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११ः३७ बजे रहेको जानकारी नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको छ । मङ्सिर १ गते मध्याह्नकालमा टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साइत खोज्नेका लागि मकर लग्न, वृष नवमांश, अभिजित मुहूर्तको शुभसाइत दिइएको छ । राज्य सञ्चालकले भने साइतमै टीका लगाउनुपर्ने र सर्वसाधारणका लागि मध्याह्न कालमा टीका लगाउन कुनै समस्या नरहेको समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन् । यस वर्ष यमपञ्चक कात्तिक २७ गतेदेखि शुरु हुन्छ । त्यस दिनदेखि यमदीप दान शुरु गरिन्छ । कात्तिक २८ गते काग तिहार परेको छ । यसैगरी धनवन्तरी जयन्ती, धन त्रयोदशी र धनतेरस पर्व पनि त्यसै दिन परेको छ । कात्तिक २९ गते बिहान नरक स्नानसहित कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मीपूजा परेको छ । अपराह्न १ः४९ बजेसम्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी र त्यसपछि औंशी तिथि लाग्ने भएकाले शास्त्रसम्मत रूपमा पर्वसम्बन्धी निर्णय गरिएको
‘प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना लाग्यो’ भन्दै यसरी लेखिएछ ट्वीट? खुल्यो यस्तो रहस्य (सम्बन्धित स्टाटस हेर्नुहोस्)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्वीटर एकाउन्टबाट उनलाई कोरोना भएको र निको भएको एक ट्वीट एकै छिनमा भाइरल भयो । यो कसरी भयो भनेर पहिले त सबै अचम्ममा परे । पछि एकैछिनमा यस ट्वीटको तथ्य उजागर भयो । यो ट्वीट सबैभन्दा पहिले पत्रकार किशोर श्रेष्ठले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको ह्याण्डलबाट भएको ट्वीटको स्क्रीन सट सार्वजनिक गर्दै उनले यसबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्वीटर ह्याण्डलवाट मंगलवार दिउसो उक्त ट्वीट भएको थियो । तर यो सामाग्री एकै छिनमा डिलिट भयो । यो ट्वीट असावधानीबस प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले गरेको पाइएको छ । उनले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलबाट लेखेँ भनेर झुक्केर प्रधानमन्त्रीको ह्याण्डलबाट लेखेको पाइएको हो । उनले तुरुन्तै यो ट्वीट डिलिट गरेका थिए । तर डिलिट हुनु पूर्व नै त्यो सामग्री सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेको थ